आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. – Kavrepati
Home / रोचक / आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो….
admin July 23, 2021	रोचक Leaveacomment 96 Views
Previous गुल्मीमा १४ वर्षीया छोरी गर्भवती भएपछि आमाले कस्ले यस्तो गर्यो भनेर सोध्दा, छोरीले आफ्नै बुवालाई देखाएपछि….
Next वोरिपरी जंगल बिचमा छ एक्लो घर , निकै रहस्यमय देखिने यो घरको यस्तो छ कथा , सुनसान एक्लो घरमा बस्छन यी बुढा बुढी
मेरो नाम हना हो र म ह स्त मै-थुन गर्छु । तपाईं गर्नुहुन्छ ? धेरै …